स्मार्ट सिटी वनाउन फोहर उठाउनु नपर्ने ? – NEWS24 TV – Nepali Live – Videos & Entertainment नेपाली लाइभ
स्मार्ट सिटी वनाउन फोहर उठाउनु नपर्ने ? – NEWS24 TV
यी फोरका डंगुहरुलाई हेर्नुहोस् । यिनले प्रत्येक दिन महानगरबासीलाई नाक थुन्न बाध्य पारिरहेको छ भने नवनिर्वाचित जनप्रतिनीधिहरुलाई गिज्जाईरहेको छ । भन्ने बेलामा स्मार्ट सिटीका भाषण गरिएपनि व्यभारमा भने फोहर उठाउने व्यवस्था समेत मिलाउन सकेका छैन्न । यो दृश्य हेर्नुहोस् । यो राष्ट्रपति कार्यालय नजिकै नेपालको सर्वधिक भिआईपी र भिभिआईपी हिड्नेबाटोमा राखिएको फोहर हो । कुटनीतिक नियोगका प्रमुख देखी मन्त्री, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति यही सडकको बाटो हिड्छन् ।